South-Africa Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'South-Africa'
Soomaalida Magaalada Pritoria ee Dalka South Afrika oo iska Dhiciyay Banaanbaxayaal Doonayay inay Dukaamadooda Boobaan (VIDEO)
February 24, 2017 – Waxaa maanta dagaal isaga horyimid Bulshada Soomaalida ah ee ku nool magaalada Pritoria ee dalka Koonfur Afrika iyo dad dalkaasi u dhashay oo doonayay inay boobaan oo bililiqaystaan dukaamada Soomaalida. Ganacsada Soomaalida ayaa is uruursaday markii ay arkeen dad koonfur Afrikaan ah oo banaanbaxaya, kuwaasi oo ku soo socday goobahooda ganacsiga. …
DAAWO: Buuq iyo Dagaal ka Dhacay Baarlamaanka Dalka Koonfur Afrika (VIDEO)
February 10, 2017 – Waxaa markale uu buuq iyo dagaal gacmaha la isula tegay uu ka dhacay baarlamaanka dalka Koonfur Afrika. Xildhibaanada mucaaradka ee Xisbiga EFF oo ka tirsan Baarlamaanka dalka Koofur Afrika iyo ciidamada ilaalada ayaa waxaa dhex maray dagaal gacan ka hadal ah, iyagoo isla dhacay feer, iyo faralaab, kaddib markii Mucaaradka ay …
December 14, 2016 – Labo Ganacsato oo soomaali ah ayaa la sheegayaa in saqdii-dhexe ee xaley nolosha lagu gubay, falkani ayaa ka dhacay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Africa, sida ay sheegeen Warbaahinta Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika. Labadan qof ee nolosha lagu gubay ayaa waxaa goobtooda ganacsi xalay saqdii dhexe ugu soo galay rag …
Muwaadin Kale oo Soomaali ah oo Maanta Lagu Dilay Dalka Koonfur-Afrika (VIDEO)
November 25, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in maanta dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaali ah oo ganacsade ahaa, iyadoo maydkiisa laga helay wadada dhinaceeda. muwaadinkan Soomaaliga ah ayaan ilaa hadda la’aqoon cida dishay, iyadoo dalka south afrika ay jiraan burcad hubaysan oo beegsada dadka Soomaalida ah ee ka ganacsada …
November 23, 2016 – Shacabka Soomaalida ah ee ku nool magaalada Rusterburg ee Dalka Koonur Afrika ayaa sheegaya in xalay kooxo hubeesan ay tuulo katirsan magaaladaasi dil iyo dhaawac ugu geesteen labo wiil oo Soomaali ah. Kooxo bistoolado ku hubeesan ayaa la sheegayaa inay xalay saqdii dhaxe weerar ku qaadeen, Dukaan ay ku sugnaayeen labo …
November 21, 2016 – Wararka ka imaanaya Gobolka Eastern-Cape ee dalka Koonfur-Afrika ayaa sheegaya in xalay gobolkaasi ay ku geeriyoodeen afar dhalinyaro Soomaali ah oo ku ganacsan jiray dukaan ay ku lahaayeen deegaankaasi. Ragan ayaa la sheegayaa inuu ku gubtay gurigii ay ku jireen oo ahaa guri shub ah, baaritaan la suubiyay ayaa lagu sheegay …
Boob Xoogan oo loo Gaystay Dukaamada Soomaalida ee Dalka Koonfur Afrika (VIDEO)
October 29, 2016 – Waxaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur- afrika si ba’an loogu boobay dukaamado badan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ku nool magaaladaasi. Hadaba qaar kamid ah ganacsatadaasi ayaa ka hadlay sidii ay wax u dhaceen, iyagoona sheegay in dukaamo badan oo Soomaaliyeed ee furnaa xiliga uu mudaaharaadka dhacayay lagu boobay …
August 22, 2016 – Kooxo Burcad ayaa ganacsade Soomaali ah ku dilay mid kalana ku dhaawacay magaalaga Johannesburg ee Wadanka Koonfur Afrika, falkan ayaa dhacay kadib markii Burcadani ay ku weerareen gudaha dukaan ay lahaayeen. Wadanka Koonfur Africa ayaa waxaa weli kasii socda weerarada lagu qaadayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kusugan dalkaasi iyo goobohooda ganacsiga, waxaana …